La devozione per offrire la giornata al nostro Angelo Custode | Ilblogdellafede
Ofufe inye tobọchị nye onye isi nchedo anyị ụbọchị
Ezigbo onye nlekọta dị nsọ, gị onwe m na-ekelekwa Chineke, Onye nyefere m n'aka nzọpụta gị.
O Onye-nwe, a na m ekele gị maka onyinye nke Guardian, onyinye ị nyere m n’onwe m. Ekele m gị maka ike i nyela mmụọ ozi m ka o wee nyefee ịhụnanya gị, ihe nchebe gị nye m. Ka otuto diri Chineke maka ịhoputara ihe nkpuchi nke onye nnochi anya ya.
Ekele m gị, mmụọ ozi nke nianche nche m, maka ndidi ị nweere m yana maka ọnụnọ gị mgbe niile n'akụkụ m. Daalụ, Guardian mmụọ ozi, n'ihi na ị na-ekwesị ntụkwasị obi n'ịhụnanya, ị nweghịkwa ike ijere m ozi. Gị onye na-adịghị elepụ anya n’ebe Nna m nke kere m nọ, site n’aka Ọkpara onye zọpụtara m na mmụọ nsọ nke na-afụ ịhụnanya, na-ekpegara Atọ n’Ime Otu ụbọchị kwa ụbọchị.
Obi siri m ike, kwere na a ga-aza ekpere m. Ugbu a, Guardian Angel, a na m akpọ gị oku ka ị buru m ụzọ n'ihe omume nke taa.
(chee nye mmụọ ozi nkwa nke ụbọchị, ọrụ, njem a ga-eme, nzukọ…).
Chebe m ka ihe ọjọ na ihe ọjọ jọrọ njọ; Gbaa m ume okwu nkasi obi m gha agha ikwu: mee m ka m mata uche Chukwu na ihe Chukwu choro imem.
Nyere m aka idobe obi nwata mgbe nile n’iru Chineke (Abụọma 130). Nyere m aka ịlụ ọgụ megide ọnwụnwa na imeri ọnwụnwa megide okwukwe, ịhụnanya, ịdị ọcha, kuziere m ịhapụ onwe m nye Chineke na ikwere na ịhụnanya.
Mọ di ala nke Mọ Nsọ, sachapụ ebe nchekwa ihe m na anya efu m, ihe niile m na - anụ ma na - ebe niile. Mee ka m nwere agụụ ihe ọjọọ; site na nkpasu-iwe gabiga n’ihe m nwere ikwubiga okwu ókè, site na nkụda mmụọ; site n'ihe ọjọọ nke ekwensu na-ewetara m ka ọ dị mma na njehie ewepụtara dịka eziokwu. Nye m udo na udo, ka ihe ọ bụla ghara ịdakwasị m, ọ nweghị ihe ọjọọ anụ ahụ na nke omume na-eme ka m nwewe obi abụọ banyere Chineke.
Jiri anya gi na oru oma gi duo m. Soro m lụọ ọgụ. Nyere m aka ijere Onyenwe anyị ozi na umeala.
Ana m ekele gị mmụọ ozi nke Guardian!
← Na post gara aga Gara aga post:Olee otú anyị ga-esi mee ‘ka ìhè anyị na-enwu’?
Ọzọ Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa ma ọ bụrụ na enwere onye ọ bụla na ndụ gị nke ị malitere inye